Ahoana no ahafahan'ny film capacitors mahazo toerana ao amin'ny sehatry ny angovo vaovao?
Miaraka amin'ny karbaona an'ny governemanta Shinoa, nanatsara kokoa ny fiheveran'ny olona ny tsenan'ny angovo vaovao. Ny capacitor dia singa elektronika tena ilaina amin'ny rafi-pandaminana, izay ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny herinaratra sy elektronika. Ny sarimihetsika capacitors dia miavaka amin'ny toetran'ny avo naoty malefaka, ny fiainana lava tsingerin'ny, tsy-polarity, sns Get ny sain'ny olona. Araka ny drafitra dia mahatratra 20% ny varotra fiaran'ny angovo vaovao any Shina tamin'ny taona 2025, midika izany fa amin'ny 2025 dia hihoatra ny 5 tapitrisa ny fiara mitondra angovo vaovao. Aorian'ny taona 2021, hiitatra amin'ny 45 gW sy 50GW ihany koa ny fahafahan'ny herin'ny photovoltaic sy ny rivotra. Ny fanitarana ny tsenan'ny angovo vaovao dia hitarika ny fitomboan'ny capacitors film manify.
1) Nitombo tsikelikely ny sahan'ny fampiharana amin'ny sarimihetsika manify, ary ny ampahany amin'ny sehatra isan-karazany dia miova hatrany, ary ny fiara angovo vaovao dia ho lasa hery lehibe mitondra ny fitomboan'ny tsenan'ny sarimihetsika manify.
Tamin'ny taona 2000, ny tsenan'ny capacitor sarimihetsika dia nifantoka tamin'ny fitaovana an-trano, saingy tamin'ny firongatry ny fampiharana hafa mipoitra, dia nihena tsikelikely ny ampahany amin'ny tsenan'ny herinaratra an-trano. Taorian'ny taona 2017, ny faritra indostrialy sy ny fanaraha-maso dia lasa tsenan'ny sarimihetsika manify capacitors, ary ny fotodrafitrasa vaovao no lasa hery lehibe indrindra hampiroboroboana ny fampandrosoana ny capacitors sarimihetsika manify. Rehefa nihatsara tsikelikely ny fiara elektrika angovo vaovao, ny fiara angovo vaovao dia ho lasa hery lehibe mitarika amin'ny fitomboan'ny tsenan'ny capacitance sarimihetsika manify.
2) Ny tsenan'ny capacitor sarimihetsika dia anjakan'ny orinasa iraisam-pirenena. Tsy manana toerana afa-tsy eo amin’ny tsena ny orinasa sinoa. Ny sehatra avo lenta dia ataon'ny orinasa mandroso iraisam-pirenena, ary ny orinasa sinoa dia mazoto kokoa amin'ny vokatra antonony sy ambany.
Ny capacitor sarimihetsika manana voltase avo lenta dia vokatra avo lenta, sakana ara-teknolojia avo lenta, sanda fanampiny avo lenta, ary ny teknolojia fototra dia fehezin'ny mpitarika iraisam-pirenena. Ny tsena dia anjakan'ny Japoney sy Eoropeana ary Amerikana mpanamboatra. (Nichicon, EPCOS, KEMET). Mbola elanelana lehibe eo amin'ireo orinasa mandroso iraisam-pirenena ny teknolojia famokarana ao Shina. Sarotra ny manana tartar amin'ny tsena avo lenta ao anatin'ny fotoana fohy.
3) Ny orinasa mpamokatra sarimihetsika capacitor ao Shina dia hanao fanovana amin'ny ambaratonga
Ny kapasitera sarimihetsika ilaina amin'ny fiara angovo vaovao dia manana fepetra manokana amin'ny fanamboarana, ary ny vokatra mahazatra matetika dia mitaky asa bebe kokoa, ary ny tombom-barotra dia tsy voatery hifanaraka amin'ny fidirana. Ny orinasa Shinoa dia afaka mianatra avy amin'ny orinasa Japoney, araka ny fanangonan-tsonia ara-teknolojia amin'ny fizotran'ny famokarana vokatra manerantany, mba hampihenana ny fotoana fikarohana sy ny fampandrosoana mifandraika amin'ny filan'ny mpanjifa, ary ny fanamafisana ny viscosity mpanjifa amin'ny fanatanterahana ny famokarana vokatra.